Gobolka Västmandland waxuu ka mid yahay gobolada Iswiidhan ugu yar. Waxuuna lee yahay 10 degmo ayadoo ee degan yihiin gobolka oo dhan 260 000 oo qof, kala barkood waxeey dagan yihiin Västerås. Värmland waxeey ku taala bartamaha gobolada Mälar, waxeeyna markii meelaha kale loo firiiyo, uga dhawdahay Stockholm, Uppsala, Örebro iyo Eskilstuna. Gobolka Västmandland waxuu ka mid yahay dhulka Värmandland, gobolka waxuu ka kooban yahay qeeybta bari ee dhulkaas.
Xaalada suuqa-guriyaasha ee gobolka, degmo, degmada kalemba waa ugu kala duwan yihiin. Degmooyinka badankood waxeey ka waraamyaan in ee dheelo tirid jirto ama guriyaal dheeraad ee xagga suuqa-guriyaasha. Laakin xataa degmooyinka soo bandhigaayo dheelo tirid ama guriyaal dheeraad ah waxaa ka jirto baahi loo qabo nuuc guriyaal qarkood. Sido kale degmooyinka soo bandhigaayo in ee jiraan guriyaal dheerad ah, wee yaraadeen. Sidaas darteed ayaa geesas badan bilaabeen in ka wada hadlaan waxa loo baahan yahay si uu socoto dhisinta guriyaasha ee gudaha degmooyinka gobolka, hadana waxaa la qorsheeyooyaa dhismooyin cusub.
Gobolka Västmandland waxuu ku yaalo shirkado badan oo waa weeyn hadana caalami ah oo ka hoowl galo laamaha mashiinada, jidadka, quwada, daryeelka iyo nabadgelyada iyo caafimaadka. Sido kale gobolka waxuu mudo dheer lahaay warshadeeyn ka gashay suuqa caalamiga abuurtayna fursado shaqadeed. Shirkadaha weeyn waxeey lee yihiin hoowlo cilmi baaris iyo hormarin oo xoog leh, taasi oo keeneeyso in baahi weeyn loo qabo injineero.
Degmada iyo maamulka gobolka caafimaadka ayaa ah shaqo dhiibayaasha ugu weeyn gobolka. Dadka ku jiro da'da xilliga shaqada ee joogo gobolka waa sii yaranooyaan, gaar ahaan kuwa ku dhashay dalka Iswiidhan. Taasi mecnaheed waxeey tahay in dadka dibada ku dhashay ee muhiim yuhiin sidii loo hubi lahaa gobolka helidiisa shaqaalo.
Gobolka Västmanland waxuu lee yahay 4 isbitaal. Maamulka gobolka caafimaadka waxuu lee yahay isbitaalada ku yaalo Västerås, Köping iyo Sala. Isbitaalka ku yaalo Fagersta hab madaxbanaan ayaa loo maamulaa. Isbitaalka waxaa uu sii dheer qaabilaadyo dhakhtareed ee reed oo kuwo madaxbaan iyo kuwo guud ah (ruggag caafimaad). Adiga ayaa ka dooran kartid gobolka Västmanland rugta caafimaadka aad rabto in aad tagto.
Gobolka waxuu lee yahay dhul kala duwan oo leh bey'ado iyo sarayaal badan oo xiiso leh. Koonfurta waxaa ku yaalo wabiga Mälaren oo leh jasiirado yaryar iyo dhulkiisa oo balaaraan. Dhanka waqooyiga dhulkiisa waxaa ku sii badan buur, mareeyn waadi iyo jiqaq. Waa masaafado gaaban, waana sahlan tahay in dabiicada la tago oo loogu tago dabaal, kaluun dabeeysi, wareega jiqda, doon-nololeedka iyo hoowla kale ee dibadeed. Gobolka Västmandland waxaa ku yaalo 90-yemo keeyd ee dabiicadeed iyo 50-yemo dhismo-taarikhi ah. Taajir ayaa laga yahay dhanka soo bandhiga howlaha dhaqameed oo loogu tala galay qofka hamiga uu hayo taariikhda, isboortiga, farshaxanka sawireed, heesaha iyo riwaayadaha.
Wadashaqeeyn firfircoon ayaa gobolka ka socoto. Waxeey wadashaqeeynta ka dhaxeeysaa hey'addaha dowlada, degmooyinka gobolka, shirkadaha iyo ururada samafalka ayadoo loo shaqeeynaayo sidii buuxinta shuraada ee mustaqbalka uu wanaagsan loogu sameey lahaa muwaadiniinta gobolka, dadka caadiga iyo shirkadleeydaba, iyo dadka dalka ku cusubba.
Sidoo kale Maamulka gobolka iyo degmooyinka gobolka iyo maamulka gobolka ee arimaha caafimaadka waxeey kala qorteen sharaxaad ku saabsan ula jeedo, si loo sameeyo loona sii heeysto habab wadashaqeeyn ee dheer hadana sii jireeyso, taasi oo natijadeedu noqotay jirtaanka gole wadahadal oo joogto ah kuna saabsan arimaha is dhexgalka.
Söker utbildad kontorsvaktmästare Kontorsvaktmästare
Söker legitimerade lärare i matematik och fysik Lärare i gymnasiet
Grafisk formgivare till kreativa produktionsbyrån Klemets Zackrisson Webbdesigner
Medarbetare till KFC på KFC Restaurangbiträde
Nu söker vi en marknadsförenings planerare till Hästen i Köping ! Marknadskommunikatör
Städare / lokalvårdare , vik för augusti - Västerås Städare/Lokalvårdare
Hälsa på ditt nya jobb som maskinoperatör (skift) Plastmaskinoperatör
Lärare i engelska åk 4 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Vill du vara med och starta ett projekt för att unga vuxna ska få arbete? Socionom
Är du arbetsterapeut och vill stödja unga vuxna ut i arbete? Arbetsterapeut
Barnskötare till Rundelns förskola Barnskötare
Platschef till Anytime Fitness Västerås Butikschef
Säljare till Anytime Fitness Västerås Innesäljare
Kvik söker Västerås bästa säljare Innesäljare
TAXI Västerås söker fler trevliga chaufförer Taxiförare/Taxichaufför
Musiklärare till årskurs 1 - 6 , Nyckelbergsskolan. Musikpedagog/Musiklärare
Pizzabagare i Västerås Grillbiträde/Gatuköksbiträde
Servitör / Servitris till Västerås Servitör/Servitris
Systemingenjör till Combitech i Arboga Nätverksadministratör
Lärare i SO till Skiljeboskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Bogga 1 ee ka mid ah 50
Västmandland waxeey lee dahay toban degmo: Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar iyo Västerås. Skinnskatteberg ayaa ah degmada ugu yar gobolka, waxaana dagan in dhafeeyso 4 000 oo qof. Västerås waa magaalada lixaad ee Iswiidhan ugu weeyn ayadoo ee dagan yihiin in dhafaayo 142 00 oo qof. Degmada Västerås ayaa gaar ahaan sii koreeyso laakin sido kale degmooyin kale oo gobolka ku yaalo waxeey muujinaayaan badnaanshaha dadka oo fiican.